Dhacdadii Xabsiga Dhexe ayaa loo xiray 27 qofood oo 12 ka mid ah askar yihiin, halka kuwa… – Hagaag.com
Dhacdadii Xabsiga Dhexe ayaa loo xiray 27 qofood oo 12 ka mid ah askar yihiin, halka kuwa…
Waxaa la soo geba-gabeeyay baaritaankii lagu waday weerarkii 10-kii bishan ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar, kaasoo ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof, oo shan iyo toban ka mida ay ahayd maxaabiistii xabsiga ka dhex dagaalantay.
Guddigii baaritaanka waday ayaa waxay Magaalada Muqdisho kula kulmeen Sii Hayaha Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), waxayna kulanka ku soo bandhigeen warbixin ku aadan xog uruurintii ay sameeyeen.
Guddiga ayaa intii ay baaritaanka wadeen waxay ogaadeen in 8-dii bishan gudaha xabsiga la geliyay hub, sidoo kalana isla 10-kii bishan la geliyay rasaas dheeraad ah, taas oo horseeday in Shabaabkii ku xirnaa xabsiga ay awoodaan inay ka dhex dagaalamaan. Hubkan waxaa qayb ka ah bastoolado iyo bambaanooyin lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay liin ku jirto.
Dhacdada ayaa loo xiray 27 ruux oo ay ka mid yihiin 12 askari oo ka tirsan Ciidanka Asluubta, oo Saraakiil ku jirto, 6 qof oo shacab ah iyo 9 ka mid ah maxaabiistii xukuneyd, oo ka qayb qaadatay weerarka.
Saraakiisha Ciidanka Asluubta ee dhacdadaasi loo xiray waxaa ka mid ah Taliyihii Xabsiga Dhexe ee Xamar iyo Kuxigeenkiisii, iyadoo lagu eedeeyay inay fududeeyeen weerarka amaba ay sameeyeen dayacaad iyo gudasho la’aan, waajibaadkii loo igmaday.
Guddiga ayaa tilmaamay, bacdamaa ay baaritaanka soo geba-gabeeyeen in wixii ka soo baxay ay ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Dowladda Somalia ayaa waxaa muuqata inay falcelin deg deg ahi ka bixisay weerarkii Xabsiga Dhexe, ka dib dhalleecayn xoog lihi oo kaga timid bulshada iyo weliba Siyaasiyiinta Mucaaradka.